Airbus hanamafisana ny fifandraisana anelanelan'ny firenena GCC
Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Airbus hanamafisana ny fifandraisana anelanelan'ny firenena GCC
Airlines • Airport • Associations News • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao farany UAE
Ny fifanarahana porofo momba ny foto-kevitra (PoC) dia ahafahan'ny Airbus hitsapa ny fifandraisan'ny tambajotra Critical Public Security amin'ny, sy eo amin'ny faritanin'ny firenena roa amin'ny Helodrano.
Airbus dia miasa manohana ny tanjon'ny fanovana dizitalin'ny GCC.
Ny sekretera jeneralin'ny Filan-kevitry ny fiaraha-miasa amin'ny Golfa (GCC) sy Airbus dia nanao sonia Memorandum of Understanding.
Airbus dia mamolavola paikady amin'ny antsipiriany hijerena tsara indrindra ny fepetra takiana amin'ny asa fitoriana sy ny raharaha eo amin'ny tsenan'ny GCC.
Ny sekretera jeneralin'ny Filan-kevitry ny fiaraha-miasa amin'ny Golfa (GCC) sy Airbus dia nanao sonia Memorandum of Understanding (MoU) nandritra ny fotoana nitohy Expo 2020 Dubai hanamafisana ny fandrindrana ny fifandraisana amin'ny sisintany sy ny fifandraisana eo amin'ny firenena GCC, manomboka amin'ny fampiharana "porofon-kevitra" voalohany eo amin'ny mpikambana 2.
Ny fifanarahana porofo momba ny hevitra (PoC), nosoniavina tamin'ny 3 Oktobra teo amin'ny sehatry ny fampirantiana GCC tao amin'ny Expo, dia hamela Airbus hizaha toetra ny fifandraisana amin'ny tambajotra Critical Public Security amin'ny, ary eo anelanelan'ny faritanin'ny firenena Golfa roa.
Ny MoU dia nosoniavin'ny Maj. Jeneraly Hazaa Ben Mbarek El Hajri, sekretera mpanampy amin'ny sekretera sekretera jeneralin'ny filan-kevitry ny fiaraha-miasa amin'ny Golfa, ary Selim Bouri, Lehiben'ny Moyen Orient, Afrika ary Azia Pasifika ho an'ny fifandraisana amin'ny tany azo antoka amin'ny Airbus.
“Hampiasa ny Inter-System Interface izahay hampifandray ireo tambajotram-pifandraisana Critical Communication roa ary hanome làlana ho an'ny fiaraha-miasa tsara sy haingana ary mahomby kokoa eo amin'ny hery fiarovana sisin-tany avy amin'ireo firenena GCC. Hampiasainay ireo singa maoderina amin'ny rafitra Tetra mba hanamafisana ny fifandraisana an-tsisintany eo amin'ireo masoivohon'ny Public Security, izay tena ilaina amin'ny fotoana hiatrehantsika fanamby amin'ny fiarovana ny sisintany. Eo ambanin'ny fifanarahana POC anay, ny ekipantsika manam-pahaizana dia hizaha toetra ny lafiny teknika sy fampandehanan'ity asa ity eo am-pampiasana ny ambaratonga avo indrindra amin'ny fisian'ny, fiainana manokana ary fiarovana omena anay. Ankasitrahanay ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny Sekretera jeneralin'ny GCC ary misaotra azy ireo izahay noho ny fahatokisany ny teknolojia anay. ” Selim Bouri, Lehiben'ny Moyen Orient, Afrika ary Azia Pasifika ho an'ny fifandraisana amin'ny tany azo antoka ao amin'ny Airbus dia manazava.
“Miasa amin'ny fanohanana ny tanjon'ny fanovana dizitalin'ny GCC ny Airbus. Mamolavola paikady amin'ny antsipiriany izahay hamahana tsara ny fepetra takiana amin'ny misiona sy ny raharaha ilaina amin'ny tsenan'ny GCC amin'ny alàlan'ny fananganana tambajotra fifandraisana sy fiaraha-miasa azo antoka. Ity MoU farany ity dia porofon'ity fanoloran-tena ity, "hoy i Bouri nanampy.